Izindaba - Isingeniso sokusebenza komkhiqizo
Isingeniso sokusebenza komkhiqizo
Beijing Wistron Technology Ltd. Traffic Izinsiza kusebenza Co., LTD. khiqiza izikopelo zomgwaqo welanga namehlo ekati elanga le-LED akhanyisa i-Southeast Asia. Umkhakha weSolar road studs waseWistron ufaka isandla ekwehliseni inani lezingozi zomgwaqo kanye nokufa kwabantu emgwaqeni othile wokufa.
I-Beijing Wistron Technology Ltd. inkampani egxile ekwakhiweni, ekwenziweni, ekuhlinzekelweni nasekufakweni kwezitadi zomgwaqo ezintsha ze-LED zobuchwepheshe obusha. Umgwaqo welanga we-LED stud ukhanyisa umgwaqo oyingozi oholela kuthelawayeka nomgwaqo eSoutheast Asia. Ngaphambi kokuthi sifake imisebe yelanga ye-LED lapha, umgwaqo ogobile waseNingizimu-mpumalanga ye-Asia owaziwa nangokuthi "Umhubhe Wokufa" ungenye yemigwaqo eyingozi kakhulu ezweni lonke laseNingizimu-mpumalanga ye-Asia. Abashayeli abaningi bahlala bengena ezingozini ezimbi neziyingozi kulo mgwaqo ogudlukayo, omncane futhi omnyama wezintaba. Kepha umgwaqo welanga we-LED ugcine impilo yabo.
I-Beijing Wistron Technology Ltd. uchungechunge olusha lwe-high-tech elanga lomgwaqo we-LED lwaluyimodeli enkulu esetshenziswe kulo msebenzi othile. Ngayinye indlela entsha yobuchwepheshe be-LED yomgwaqo wobuchwepheshe be-Wistron Traffic light series yafakwa esisekelweni somgwaqo, okwakha umphumela okhanyayo nowokuxwayisa.
Impendulo evela kuphrojekthi ye-Wistron solar LED yomgwaqo wokukhanyisa emgwaqeni ijika ibe mihle ngokwedlulele futhi yaphumelela kuze kube manje. Abashayeli abaningi manje abasondela kulo mgwaqo oyingozi ebusuku baneliseke ngendlela emangalisayo ngokubonakala kwebanga okulethwa yisitudiyo esisha se-LED esisezingeni eliphezulu, esisiza ukuxwayisa nokuxwayisa abashayeli ngezingozi ezizayo ezikhona emgwaqweni ongaphambili; ukusiza ukuqondisa nokuvikela abashayeli ngokuphepha endleleni yabo.
Isikhathi Iposi: May-27-2021